Ugu yaraan shan askari oo katirsan Puntland oo ku dhimatay weerar lagu qaaday saldhig ciidan oo kuyaala Buuraha Galgala - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandUgu yaraan shan askari oo katirsan Puntland oo ku dhimatay weerar lagu qaaday saldhig ciidan oo kuyaala Buuraha Galgala
Saldhig ay ciidamada PMPF ku leeyihiin Buuraha Galgala. [Sawirka]
Garoowe-(Puntland Mirror) Saldhig ay leeyihiin ciidamada Puntland ayaa fiidkii xalay oo Sabti ahayd la weeraray, ilo-wareedyo ayaa u xaqiijiyay warsidaha Puntland Mirror.
Ugu yaraan shan askari oo katirsan Puntland ayaa ku dhimatay weerarka oo socday dhowr saacadood, ilo-wareedyo milatari, kuwaasoo codsaday in aan magacooda la sheegin, ayaa u sheegay Puntland Mirror.
Saldhiga ayaa kuyaala deegaanka Bali-khadar ee Buuraha Galgala, sida ilo-wareedku sheegeen.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarkaas, sida warbaahinta xiriirka la leh Al-Shabaab ay ku warameen.
Saldhiga la beegsaday ayaa waxaa leh ciidamada badda Puntland ee PMPF, sida aanu kasoo xiganay ilo-wareedka.